Dowladda Puntland iyo Hay’adda UNDP oo ku kulmay Garoowe. • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / Dowladda Puntland iyo Hay’adda UNDP oo ku kulmay Garoowe.
Dowladda Puntland iyo Hay’adda UNDP oo ku kulmay Garoowe.
January 23, 2010 - By: Abdirahman. A
Waxaa maanta magaaladda Garoowe ee caasimada Puntland kulan ku qaatay Masuuliyinta Dowladda Puntland iyo Saraakiisha Hay’adda Qaramada Midoobay ee uu qaabilsan horumarinta marka magaceeda lasoo gaabiyo ee loo yaqaano UNDP.
Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta iyo Xirrirka Caalamiga ee Puntland Faarax Aadan Dhalac oo la hadlay Horseed Media markii uu soo dhamaaday kulankaas, waxaa uu sheegay in kulankaas ay shir gudoominaysay Wasaaradiisa ayna wada qaateen inta badan Golaha Wasiirada ee Puntland iyo Masuuliyinta Hay’adda UNDP.
Dhegayso Waraysi Horseed Media kala yeelatay kulanka UNDP iyo Puntland: Wasiirka Qorsheynta Mudane Faarax Dhalac [powerpress]
Waxaana uu hadalkiisa ku daray in kulankaas uu ahaa mid looga hadlaayay mashariicda ay Hay’adda rabto in ay ka fuliso degaanadda Puntland sanadkaan aan ku jirno ee 2010-ka.
Wasiirka ayaa sheegay in Hay’adda ay sheegtay ayna balanqaaday in Dowladda Puntland ay ka taageeri doonto arimaha Amaanka ayna tababar uu furi doonto Ciidanka Amaanka Puntland, iyadoo ay sidoo kale dayactir ku samayn doonto Saldhigyada Booliska ee ku yaala Puntland.
Tababarka loo furi doono Ciidanka Amaanka ee Puntland ayaa waxaa uu sheegay in ay ka dhici doonto Akadeemiyada Booliska ee degmadda Carmo ee gobolka Bari isla sanadkaan 2010-ka.
Mr.Dhalac ayaa xusay in Masuuliyiinta Puntland iyo kuwa Hay’adda ay isku afgarteen in xiriir iyo wadashaqayn wanaagsan ay dhexmarto labada dhinac.
Kulankaan ayaa ahaa mid aan caadi ahayn, waxaana ay masuuliyiinta Puntland ay ugu baaqeen Hay’adda UNDP in ay kasoo baxaan balanqaadyada ay sameyeen.
Kulankaan ayaa imaanaya xilli magaaladda Garoowe ee caasimada Puntland uu isna kusoo gaba gaboobay shir ay wada qaateen Golaha Wasiirada ee Puntland iyo Hay’addaha Samafalka ee ka hawlgala dalka Soomaaliya.